: Qormadii -16-aad iyo Raad Raacii Madaxweynayaashii Somaliland soo Marey.” | Xariirad News Network Hoyga Wararka Sugan	Home
Thursday, July 25th, 2013 | Posted by xariiradnews : Qormadii -16-aad iyo Raad Raacii Madaxweynayaashii Somaliland soo Marey.”
Madaxweynihii ugu horeeyey ee Somaliland Mudane A/rahman Ahmed Ali naxariistii jano alleh ha-ka waraabiyee mudadii uu wadanka Hogaaminaayey wuxuu ahaa waqti aad u-adag oo kala danbeyntu yareyd oo hubka lawada haystey laakiin wuxuu ku guuleystey in aanu Magaca Somaliland aaney gacantiisa ku bur-burin waana uu ku guuleystey oo wuxuu ku-wareejiyey Cigaal.
Madaxweynihii labaad ee Somaliland soo marey wuxuu ahaa Alleh haw-naxasiistee Mohamed Xaji-Ibrahim Cigaal, naxriistii jano Alleh ha-ka waraabiyee waxaa uu ahaa aas-aasihii dhidibada u-taagey hanaanka fareemka dimuqraadiga ee maanta Somaliland ku fadhido. Madaxweyne Cigaal waxaa la isku raacey in uu ahaa Madaxweyne Qowmiyadeed ee aanu aheyn madaxweyne Qabiil.
Nasiib-daro Maanta waxay hantidii ma-guuraanka aheyd ee ummadda Somaliland oo dhan u-dhaxeysey ay gacanta -u-gashey koox yar oo dhereg-dhaaftey oo aan danahooda mooyaane aan aqoon daryeel kale oo dhaafsiisan. Madaxweyne Siilaanyo wuxuu Ribo iyo Ra’iis ugu balan qaadey hawl-wadeenadii ugu sareeyey sharci-dejinta dawlada taa soo aheyd goobtii lagu abuuraayey, laguna ansixinaayey, laguna meel-marinaayey sharciyadii uu soo abuurey. Hadaba maadaama meel-marinta qawaaniinta distooriga ah ee Somaliland ay had-iyo-jeer ku dhacaan qaab-gacan-taag ah, waxaa halkaa ku sarifmey, oo ku-milmey oo ku-fasaqmey oo uu Virus ku galey haykalkii, hanaankii, higsigii iyo habsami-u-socodkii hawlihii dawladnimo.Waxaana meesha ka baxdey xil-gudashadii, is-xisaabintii, dhiirigelintii , maslaxadii iyo masiirkii dantii guud ee ummadda Somaliland oo dhan. Bal-hadaba Muwaadinow, xukuumadan seegtey tubtii toosneyd ee turun-turootey, ee taraartey yaa tilmaa-maaya oo ku toosi-naayaToobiyaha toosan ??? Jawaabta oo koobani waa cidna oo xukuumadii waa bilaa-bireeg ee yaaney ku-jiidhin.!!
Waxaa kale oo iyana soo kordhey hawlwadeeno dilaaliin ah oo dalqada indho ku leh oo doogsin cararaaya oo walaha ku-rafta iyaga oo had iyo jeerna difaaca xeyndaabka madaxtooyada iyo beelahooda oo keliya. Markaanu diirada saarney waxaa noo cadaatey in ay xukuumada iyo xulafadeedu ay isku wada noqdeen may-dha-naan iyo milan qun-yar-socod ah oo gacan-wadaaga -yaqaana. Xukuumada Siilaanyo waxaa uu xaalkeedii oo dhami uu noqdey dhafan-dhaaf, dhalan-habaabis, isii-aan ku siiyee, iigu dar aan kuugu daree, ii-debci aan kuu-debciyee iyo qusum iyo qoon hantidii ummadda oo hadh-madow lagu kala qaybsadey.
Short URL: http://www.xariiradnews.com/?p=23886
xariiradnews@gmail.com Posted by xariiradnews on Jul 25 2013. Filed under Articles.